बढ्दो जाडोसँगैं वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण ! « Janaboli
बढ्दो जाडोसँगैं वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण !
गोरखा । गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–७ बोर्लाङमा वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । वडा कार्यालयले वडाभित्रका सबै वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कम्मल(ब्ल्याङ्केट)वितरण गरेको वडाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उक्त वडाभित्र रहेका २१७ वृद्धवृद्धा र २३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अस्थायी टहरामा रहेका भूकम्पपीडितहरु बिहान बेलुकी जस्ताले बेरेर बनाएकोे टहरामा बस्दा शीत चुहिने र बढी चिसो हुने हँुदा कष्टपूर्ण जीवन बिताउँदै आएका छन् । वडा नं ७ चाहापनी घर भएका ७५ वर्षीय सन्ते सार्कीले भन्नुभयो, “हामीले जिताएर पठाएका मान्छेले हाम्रो मर्का बुझ्ने रहेछन् ।” रासस
उपत्यकाभित्र चाउचाउ,बिस्कुटको खोल सडकमा फाल्नेलाई ५० हजार जरिवाना !
काठमाडौं । के तपाई बिस्कुट, चाउचाउ, चक्लेट, गुट्खा, चुरोटको प्रयोगपछि खोल जथाभावि फाल्दैं हुनुहुन्छ ?
असल राजनीतिका लागि एक महिने देश दौंडाहामा निस्कँदै बाबुराम भट्टराई !
काठमाडौं । मुलधारका पार्टीभन्दा फरक उदेश्य राखेर गठन भएका पार्टीहरुको नेपालमा अस्तित्व खत्तरामा पर्ने देखिएको
खानेपानी मन्त्री विना मगर अस्पताल भर्ना !
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको सुमेरु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ
धुर्मुस-सुन्तलीको बाटोमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की ! [पती-पत्नी मिलेर गर्दैछन यस्तो काम ?]
काठमाडौं । सामाजिक सेवा भनेपछि अहिले सबैंभन्दा पहिलो नाम धुर्मुस सुन्तलीको आउँने गर्दछ । पछिल्लो
महिनावारी हुँदा समेत सम्बन्ध राखेकी छु : मिना ढकाल
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सम्बन्धि यस्तो जानकारी